Snn Nepal स्मार्ट फोन चलाउनेमा घातक संक्रमण हुन सक्ने ! – Snn Nepal
आजकल स्मार्ट फोन नबोक्ने को होला र ? सबैको हात हातमा स्मार्ट फोन हुने गर्दछ । यसले मानिसको व्यक्तित्वमा पनि प्रभाव पार्दछ । प्रविधिको युग भएकाले यसबाट सयौं उपयोगिता पनि पाउन सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यसले स्वास्थ्यमा हानी पार्दछ ।